Yonwabela uze wonwabele Indlu Eyakhiwe Emthini Ngasechibini! - I-Airbnb
Yonwabela uze wonwabele Indlu Eyakhiwe Emthini Ngasechibini!
Igumbi lakho lokulala e indlu encinci sinombuki zindwendwe onguBloc
Liphupha lethu lobuntwana ukuhlola, amava kunye nokonwabela.
KHAWUBE nomfanekiso-ngqondweni weNdlu Yomthi encotsheni yentaba ejikelezwe lichibi lamanzi acwengileyo elineentlanzi ezininzi apho kukho iindidi ngeendidi zeentaka ezisemoyeni nemithi eluhlaza eluhlaza.
KHAWUBE nomfanekiso-ngqondweni wendawo yakho yangasese iphakanyiswe phezulu ukusuka kumhlaba apho unokuzipholela khona wedwa okanye nomntu okhethekileyo oza kuphumla nokuphumla kakuhle.
Thatha ikhefu ngokuqubha, ukuloba, ukukhwela isikhephe okanye ukufunda nje incwadi kwi-hammock.
AKUKHO KHAWUBE nomfanekiso-ngqondweni!
I-TREE-T-HOUSE yenye inguqulelo ye-T-HOUSE ebekwe kunxweme lwechibi lwe-CAMP-T-HOUSE ngaphakathi kwe-BLOC Camp Site. Yindawo yokuhlala ephakamileyo ye-Tiny House Glamping ebekwe phakathi kwemithi emibini esecaleni kwechibi.
Kwinqanaba elisezantsi, IiNdwendwe ngokuqinisekileyo ziyakonwabela ukuzipholela kwi-al fresco kodwa egqunywe idesika yomthi ebanzi. Ungayigrisa i-BBQ apha, ube nesidlo sangokuhlwa sothando, okanye umise intente encinci enkampini. Kukho ii-hammocks ezifumanekayo apho umntu anokuphola athande ukufunda incwadi okanye ukulala. Kwaye ke kwelinye icala kukho isitepsi esikhokelela kwinqanaba eliphezulu.
Nje ukuba uphezulu, enye i-hammock cantilevered phezu kwechibi iya kukubulisa ecaleni kwebalcony yokutshona kwelanga. Ucango lweglasi olutyibilikayo luya kuvula kwigumbi elidityanisiweyo elinebhedi yesofa ye-transformer kwindawo yokuphumla okanye ukulala ebusuku. Enye i-balcony kumnyango wesilayidi ochaseneyo iya kukukhokelela ngaphandle ukuze ube nombono welanga lasekuseni phezu kweentaba. Nangona impepho ephezu komthi ipholile kakade, ewe, kukho ithuba lokuvula i-aircon!
QAPHELA: I-TREE-T-HOUSE incinci kakhulu, inokufanela kuphela abantu abayi-1-2 abanobuninzi obumalunga ne-5'-8" ubude obungumndilili wobude bamadoda amaninzi ase-Asiya afana nabasePhilippines. Abantu baseYurophu banokubhukisha ezinye iindawo zethu zokuhlala ezinkulu ze-T-HOUSE njenge-CUBE-T-HOUSE okanye i-TRUCK-T-HOUSE.
4.63 · Izimvo eziyi-86
I-CAMP-T-HOUSE ifumaneka ngaphakathi kwe-BLOC Camp Site. Ime phezu kweentaba zeSierra Madre ejikelezwe lichibi elinamanzi acocekileyo.
Indawo engenalo ulwaphulo-mthetho ikude nezixeko ezinengxolo kwaye ngokuqhelekileyo inoxolo nenzolo ikhuthaza imveliso nobuchule.
Wamkelekile kwisiqwenga sethu esithobekileyo separadesi!
Umbuki zindwendwe ngu- Bloc
Izimvo eziyi-1 241
Nangona kungekho ngamaxesha onke, uMnini kunye / okanye uMninimzi ngamanye amaxesha ukhona kwakhona kwiNdawo yeKampu ukukhokela okanye ukunceda abasebenzi abakhonza kwiiNdwendwe okanye ukonwabisa iiNdwendwe ezinobungane.
Undwendwe ngalunye luyonwabela indawo ekufuphi nendawo ye-T-HOUSE ebhukisiweyo kunye nezinto eziluncedo ekwabelwana ngazo (ichibi/unxweme/amabala) kunye nezixhobo (ukupheka / indawo yokutyela / indlu yangasese & nebhafu).
Nangona kungekho ngamaxesha onke, uMnini kunye / okanye uMninimzi ngamanye amaxesha ukhona kwakhona kwiNdawo yeKampu ukukhokela okanye ukunceda abasebenzi abakhonza kwiiNdwendwe ok…